नियतिले ठगेको सुदूर ! - Dhangadhi Khabar
शुक्रबार १४, माघ २०७८ ०३:२१
नियतिले ठगेको सुदूर !
चाहे नाम सुन्दर होस वा नहोस् नामले केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो तर कहीँ कतै सत्य हो जस्तो लाग्छ । नामले फरक पार्छ जस्तो लान्छ । भन्नेहरूले भन्लान् सुदूर पश्चिम धेरै अगाडि छ । धेरै विकास भएको छ विगतका दिनहरू भन्दा । यसको मतलब के अब हामी विगतका दिनहरू भन्दा मात्र विकसित हुने हो कि बदलिँदो विश्व बजार सँगै विकसित हुने हो ?
कहीँ कतै सुनेको थिए सुदूर पश्चिम विश्व बजार भन्दा २० वर्ष पछाडि छ । कसम सुदूर पश्चिम सुदूर पूर्व भन्दा २० वर्ष पछाडि छ । हो यो कुरा सुन्दा साँच्चिकै हामी पछाडि छौँ जस्तो लाग्छ कर्णाली नदी पार गरेर त्यो भन्दा पर लाग्दा नजरिया फरक हुन्छ । गरिने व्यवहार फरक हुन्छ । यो कसले जुरायो भूगोलले, प्रकृतिले वा वा हाम्रो आफ्नै अस्तित्वले भूगोलले झुक्कायो भनौँ भने सुदूर पूर्व भन्दा कम छैन ।
सुदूर पूर्व भन्दा ठुलो नै छ । प्रकृतिले दबायो भनौँ भने धर्तीको स्वर्ग खप्तड, बड मालिका, लगायतका ठाउँहरु यही छन् । हो हामीलाई न भूगोलले ठगेको छ न प्रकृतिले ठगेको छ । ठगेको छत केवल हाम्रो आफ्नै नियतिले ठगेको छ ।
मेरो सुदूर पश्चिमलाई ठगेको छत केवल पुर्खाहरूको पाखण्डी सोचले । १२ वर्षकी मेरी बहिनी महिनावारि हुँदा २१ दिनसम्म चिसो मौसममा एक्लै एकान्त गोठमा राख्ने हत्यारा सोचले एउटा सुन्दर ठाउँलाई ठगेको छ । जहाँ बेलुका एक्लै हिँड्न पाउँदैन दिदीबहिनीहरु । सायद यिनै पापी र नरपिजास सोच भएका लाटोकोसेरा बसेका कारणले पश्चिम मात्र भएर नै सुदूर पश्चिम हुन पुग्यो ।
यिनै नरपिजास सोच भएका लाटोकोसेराहरुका कारणले दिन प्रतिदिन दूर हुन पुग्यो । अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन मानिएको सङ्घीयताको आगमनले समेत यता न उता पार्न नसकेको सुदूर पश्चिम किन एउटा सोचाइको कारणले मात्र जहिले यताउता हुन्छ ।
जसले जेसुकै भनोस् अब साँच्चै सुदूरलाई परिवर्तन गर्ने हो भने हाम्रो पुस्ताले सुन्दरताको लडाइ लड्नु पर्नेछ । अब हामी संस्कार, सभ्यता र धर्मको लडाइ नलडेर सुन्दरताको लडाइ लड्न अग्रसर हुनु पर्नेछ । अब सुदूरको छाउ प्रथालाई विश्व बजारमा होइन खप्तडको सुन्दरतालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । सुदूरको धामी झाक्रि प्रथालाई देखाउने होइन बडिमालिकाको मुस्कानलाई विश्व सामु चित्रण गर्नु पर्छ ।
भौतिक सुन्दरताले मात्र पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्छ भन्ने पुरातन सोचलाई सुदूर पश्चिमले डढेलो लगाउनु पर्छ । सुन्दरताको अनुपम उपहार पाएको सुदूर पश्चिमलाई जसरी पटक पटक मानवीय स्वार्थले ठगिँदै आयो अब त्यसरी ठगिन दिनु हुँदैन । हरेक युवाहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट उठौँ, जागौँ र सुदूर पश्चिमको सुन्दर अभियानमा ।
प्राज्ञिक र राजनीतिक तहमा सुदूर पश्चिमको सम्वृद्धिको बहस भएको सायदै पाइन्छ । कुरा सुन्दरताको मात्र नभएर यो सिङ्गो देशको कुरा हो । नेपाल बनेन बिग्रियो देशमा केही गर्ने अवसर नै छैन । नेता केवल नेता बन्नका लागि मात्र भए, देश र जनताको समुन्नतको लागि कोही पनि नेता भएनन् । चाहे नेता होस या कर्मचारी हरेक आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि मात्र अग्रसर हुन्छन् । यी समस्या दिनहुँ बढ्दै छन् ।
बिहान उठेदेखि राति नसुतिन्जेल सम्म सडक देखि सदन सम्म यिनै बेथितिको चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । बस केवल चर्चा परिचर्चा मात्र । यिनै चर्चा परिचर्चा युवाहरू सुन्दर भूमिलाई सम्वृद्ध बनाउने जिम्मा आई एनजिओ र दातृ निकायलाई सुम्पिँदै विदेश पलायन हुन्छन् । बिरानो देशमा देश बनेन भन्दै ५ फिट उफ्रिँदै गाली गर्दै थियौ उसैको हातमा देशको भविष्य सुम्पिएर आफ्नो भविष्य खोज्न विदेश पलायन हुन्छौ । के साँच्चै स्वदेशमा अवसर र भविष्य नभएकै हो त ?
हुन त देशका उदाहरण सुन्दा नेपालीका कान भरिएका छन् तर पनि यो उदाहरण नदिइरहन सकिदैन् । राजनीतिक चक्रभिउले मात्र देशको सम्वृद्धिको यात्रामा ब्रेक लाग्छ भन्ने हो भने मित्र राष्ट्र थाइल्यण्डको उदाहरण पत्यार लाग्दो छैन । सन् २००१ मा निर्वाचनबाट निर्वाचित थाङ्सिन सिनावात्रा देखि सन् २०१३ मा निर्वाचित यिनलक सिनावात्रा सरकार प्रमुख हुन आइपुग्दा समेत राजनीतिले दिन प्रतिदिन अस्थिरता दिँदै आइरहेको थियो ।
दिन प्रतिदिनको अस्थिरताका कारण राजनीतिक विवाद र आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि थाइ सेनाले आफ्नो कब्जामा लियो तत्पश्चात् थाइ सेनाले संविधान बनाएर जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन गरायो । यसरी राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि थाइल्यान्डको संवृद्धिमा न कुनै प्रकारको रोकावट आयो नत विश्व भ्रमणमा निस्किएका पर्यटकले थाइल्यान्ड गर्न कुनै प्रकारको असुरक्षित महसुस नै गरे ।
दोस्रो विश्व युद्धले तहसनहस भएको जापान राजनैतिक व्यवस्था नै सम्वृद्धिको वाधक मानिने हो भने जापानी बादशाह पेजीको लगाव र क्रियाकलापले सायदैलाई विश्वास दिलाउला । विश्वयुद्धमा भौतिक देखि लिएर अथाह मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको जापानलाई सम्वुद्धिको काचुलि फेर्न राजनैतिक व्यवस्थाले कुनै पनि प्रकारको पूर्ण विराम लागेन ।
दशरथ चन्द, भिमदत्त पन्त, गोविन्द गौतम लगायतका अमर सपुत जन्माएको सुदूर पश्चिमले अब फोहोरी राजनैतिक चक्रभिउमा रुमलिने होइन । सुन्दरता र सम्वृद्धिको चक्रभिउमा फस्ने हो । साँच्चिकै सुदूरको सुन्दरताको पहिरनलाई अङ्गाल्नु पर्नेछ । हामीले शेर बहादुर देउवालाई ८ पटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने होइन ।
आफ्नो सिमाना मिचिनु हुँदैन भन्दै छातीमा गोली थाप्ने गोविन्द गौतमको सपना साकार पार्ने प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ । आफ्नो छरछिमेक नातेदारलाई स्वकीय सचिव बनाउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउने होइन । खप्तडकी रानीको सुन्दरता, बडिमालिकाको मुस्कान, अपि, सैपालको हाँसो बेचेर सुदूरको पहिचान फेर्ने प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्नेछ ।
जो हामी र म जस्तै म भएका युवाहरू एकजुट हुनुपर्नेछ । जबसम्म म जस्तै म भएका युवाहरुको हातेमालो हुँदैन तबसम्म यी कुरामा बाधक आइरहन्छ । अब सुदूरले हातहतियारको लडाइ होइन सुन्दरताको लडाइ लड्नु पर्नेछ । जुन लडाइ हामी स्वयमले नै जित्नुपर्नेछ ।
आउनुहोस् हामी सबै मिली एउटा प्रण गरौँ “सुन्दर पश्चिमको सुन्दर अभिभाराको लागि मेरो पनि साथ र सहयोग छ ।”
बुधबार ०७, पुष २०७८ १२:५१ मा प्रकाशित
नेकपा एमाले (35%)
नेकपा माओवादी केन्द्र (10%)
एक वर्षमा २ सय ९३ कुकुरहरूको सहारा बन्यो धनगढीको ‘स्ट्रिट पव्ज’
युक्रेन तनाव : सबै पक्षलाई संयमित रहन चीनको आग्रह
विषाक्त रक्सी सेवनबाट ५ जनाको मृत्यु, चारको अवस्था गम्भीर
कञ्चनपुरका सिमसार क्षेत्र मासिएपछि सारस घट्दै
सेती अस्पतालमा उपचाररत एक कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु
सुदूरपश्चिममा थप ५५८ जनामा कोरोना पुष्टि, १३० जना डिस्चार्ज
निडर बन्दै कैलाली ट्राफिक ! धनगढीमा गाउँपालिकाको गाडीमा लगाइयो 'ह्विल लक'